Charles Sturt University Study Centres | EduLink
Australia တွင် ပညာသင်ရင်း တစ်ချိန်တည်း၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်း
Australia တွင် ၂ နှစ်ကြာသင်ယူရသောဘွဲ့ ကိုသင်ယူပြီးစီးပါက အလုပ်လုပ်ခွင့်ဗီဇာကို နောက်ထပ် ၂ နှစ်စာ ရယူနိ်ုင်ကြောင်း သင်သိပါရဲ့လား။ သင် Australia တွင် ပညာသင်ကြားနေစဉ် အတွင်း အချိန်ပိုင်းအလုပ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သင်သိပါရဲ့လား။Edulink က သင့်ကို Australia တွင် ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည်များကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ကူညီပေးနိုင်ကြောင်း သင်သိပါရဲ့လား။
Charles Sturt Universtiy Study Centers ၌ အရည်အသွေးကောင်းမွန်၍ သင့်တင့်သောကျောင်းလခဖြင့် မဟာဘွဲ့ကို သင်ယူလိုသော ကျောင်းသားများနှင့် သင့်လျော်သော စီးပွားရေးဆိုင်ရာဘွဲ့များကို ရွေးချယ်တက်ရောက် သင်ကြားနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါမဟာဘွဲ့များပြီးဆုံးခါနီးတွင် အလုပ်သင်အဖြစ် ၃-လတာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
**Master of Commerce (12 subjects)** http://goo.gl/Kr3Jzc
၂ နှစ်ကြာတက်ရောက်သင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်နှစ်လျှင် Australia ဒေါ်လာ ၂၀,၀၂၈ (မြန် မာငွေ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်) ကျသင့်ပါမည်။ Sydney နှင့် Melbourne တို့တွင် တက်ရောက်သင်ယူနိုင်ပါသည်။
အထူးပြုဘာသာရပ်များအနေဖြင့် – Finance, General Management, Human Resource Management, Information Technology, International Management, Marketing or Strategic Management စသည်ဖြင့် ရွေးချယ်သင်ကြားနိုင်ပါသည်။
၀င်ခွင့်လိုအပ်ချက်များမှာ – အင်္ဂလိပ်စာ IELTS စာမေးပွဲရမှတ် ၆.၀ (ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီရမှတ် ၅.၅) ထက်မနည်းရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
၄နှစ် ကြာ တက်ရောက်သင်ကြားထားသော မည်သည့်ဘွဲ့ ရမဆို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
**Master of Information Technology (12 subjects)** http://goo.gl/dbaJQW
၂ နှစ်ကြာ သင်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်နှစ်လျှင် Australia ဒေါ်လာ ၂၀,၈၂၀ (မြန်မာငွေ ၂၀,၈၀၀,၀၀၀ ကျပ်) ကျသင့်ပါမည်။ Sydney, Melbourne သို့မဟုတ် Brisbane ၌ တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ပါသည်။
အထူးပြုဘာသာရပ်များအနေဖြင့် – Computer Networking, IT Management, Network Security, Software Design and Development, or Systems Analysis စသည်ဖြင့် ရွေးချယ်သင်ယူနိုင်ပါသည်။
၄နှစ် ကြာတက်ရောက်သင်ကြားထားသော မည်သည့် ဘွဲ့ ရမဆို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
**Master of Professional Accounting (12 subjects)** http://goo.gl/T59yvc
၂ နှစ်ကြာ သင်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်နှစ်လျှင် Australia ဒေါ်လာ ၂၀,၀၂၈ (မြန်မာငွေ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်) ကျသင့်ပါမည်။ Sydney, Melbourne သို့မဟုတ် Brisbane ၌ တက်ရောက် သင်ကြားနိုင်ပါသည်။
၄နှစ် ကြာတက်ရောက်သင်ကြားထားသော Accounting ဘွဲ့ရရှိထားပါက လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၀င်ခွင့် အတွက်လိုအပ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီဘူးလား? မစိုးရိမ်ပါနှင့်
၀င်ခွင့်လိုအပ်ချက် အနည်းငယ်ရှိနေပါက အဆိုပါမဟာဘွဲ့သင်တန်းများအားလုံးတွင် ၁၆ ဘာသာတွဲကို ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အသွေး လိုအပ်နေပါသလား? မစိုးရိမ်ပါနှင့်
Edulink ၌ သင်၏ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အသွေး အလျင်အမြန်တိုးတက်နိုင်ရန် သင်ကြားပေးနိုင်သည့် English သင်တန်းများ သင်ယူနိုင်သည့်အပြင် Australia နိုင်ငံတွင် University မတက်ရောက်မီ Intensive English course ကို လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါသည်။
Australia ၌ သွားရောက်နေထိုင်ရေး အတွက် စိုးရိမ်နေပါသလား? မစိုးရိမ်ပါနှင့်
Edulink က သင်အသုံးပြုမည့် Budget နှင့် ကိုက်ညီသောနေရာထိုင်ခင်းကို ကူညီရှာဖွေပေးပါသည်။
Australia ၌ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်လျှင် အနည်းဆုံး လုပ်ခ တစ်နာရီလျှင် Australia ဒေါ်လာ ၁၈ (မြန်မာငွေ ၁၈,၀၀၀ ကျပ်) ရရှိနိ်ုင်သည်ကို သိပါရဲ့လား?
Australia နိုင်ငံ တွင် ပညာသင်ယူနေစဉ် အတောအတွင်း တစ်ပတ်လျှင် ၁၀ နာရီ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါက သင်၏ နေထိုင်စာရိတ်အတွက် တစ်နှစ်လျင် Australia ဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ (့မြန်မာငွေ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်) အထောက်အကူရနိုင်ပါသည်။
Awesome study and work opportunities in Australia…
Did you know finishing 2-year degree in Australia lets you apply fora2-year working visa? Did you know you can work part-time while you study in Australia? Did you know EduLink can help you get there? Charles Sturt University Study Centres has business degrees suited to students wantingagood quality, affordable Masters degree. They will also arrangea3-month internship at the end of your degree (https://goo.gl/goSJC3).
** Master of Commerce (12-Subjects) ** https://goo.gl/Kr3Jzc
AU$20,028 per year [~MMK20,000,000]; 2-Years
Specialise in Finance, General Management, Human Resource Management, Information Technology, International Management, Marketing, or Strategic Management
Entry with IELTS 6.0 (subscores 5.5) and any 4-year undergraduate degree
** Master of Information Technology (12-Subjects) ** https://goo.gl/dbaJQW
AU$20,820 per year [~MMK20,800,000]; 2-Years
Sydney, Melbourne, or Brisbane Specialise in Computer Networking, IT Management, Network Security, Software Design and Development, or Systems Analysis
** Master of Professional Accounting (12-Subjects) ** https://goo.gl/T59yvc
Entry with IELTS 6.0 (subscores 5.5) anda4-year undergraduate Accounting degree
Don’t quite meet the requirements? Don’t worry.
All these Masters havea16-Subject option which has slightly lower entry requirements, including an MBA with multiple Specialisation options. English not good enough? Don’t worry.
EduLink has heaps of classes designed to improve your English quickly, or you can do an intensive English course in Australia before you start at University.
Don’t have anywhere to stay in Australia? Don’t worry.
EduLink can help you find student accommodation that suits your budget
Did you know minimum wage in Australia is AU$18 per hour [MMK 18,000])?
Even if you only work 10 hours per week while you study you could earn over AU$10,000per year [10,000,000] to help with the cost of living.